Kaymaha hoose: astaamaha, deegaanka, cimilada, dhirta iyo xayawaanka | Saadaasha Shabakadda
Waxaa jira noocyo kala duwan oo nidaamka deegaanka ah iyadoo kuxiran xaaladaha deegaanka jira. Maanta waxaan ka hadli doonaa Kaymaha hoose. Waxay u dhigantaa aagga Peruvian Amazon keyng oo ka fidsan dhinaca bari ee buuraha Andean. Waa nooc kaymo hawleed tayo leh oo tayo leh oo leh meelo dhererkoodu yahay 80 illaa 400 mitir oo ka sarreeya heerka badda. Waa isla wabiga Amazon.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa dhamaan astaamaha, deegaanka, dhirta iyo duudka hawdka hoose.
2 Hoyga iyo meesha kaynta dooxada ku taal
3 Ciidda iyo cimilada hawdka hoose
Waa nooc hawd ah oo sidoo kale loo yaqaan gobolka Omagua. Waxay ka kooban tahay sameynta dhir leh qaab dhismeed isku dhafan oo u dhexeeya 3 ilaa 4 lakab ama heerarka dhirta lagu daro shay hoose. Dabaqyada dhirta waxaa sabab u ah noocyada iyo dhererka kala duwan ee loo sameeyo iyadoo loo eegayo koritaankooda iyo horumarkiisa. Tifaftirka hoose waa qaybta hoose ee ka hooseysa qarka dambe. Ahaanshaha meel leh kala duwanaansho ku filan ayaa ku badan epiphytes iyo fuulista dhirta. Astaamahan oo dhami waa qayb ka mid ah biome kaynta.
Gobolka hawdka hoose wuxuu soo bandhigayaa dhul qalalan oo qalalan, in kasta oo ay waliba tahay keymo daadad badan, dhiiqo iyo geedo timireed oo safaf dhaadheer leh. Astaamaha ugu muhiimsan ee hawdka hoose waxay u taagan tahay haysashada cimilo diiran oo heer kulkeedu yahay qiyaastii 26 darajo celcelis ahaan iyo oo leh roobab badan oo ka sarreeya 3.000 mm.
Kaymaha waxay ku yaalliin dhul aad u ballaadhan oo aan caadi ahayn oo carrada ugu badan ay leeyihiin cufnaan ciid ah iyo shabakad aad u tiro badan oo wabiyaal iyo durdurro leh. Faunku waa cufan yahay oo cayayaanka iyo arachnids ayaa u badan. Badnaantaani waxay sabab u tahay kala duwanaanta noocyada iyo tirada shaqsiyaadka. Waxa kale oo xusid mudan joogitaanka kalluunka biyaha macaan badan, shimbiraha, xamaaratada iyo naasleyda dhexdooda kuwa aan ka helno culeyska, noocyo badan oo daanyeero ah iyo jaguar.
Marka la eego flora, waxaa jira kala duwanaansho weyn oo dhir ah xididdada. Waxaan sidoo kale aragnaa noocyo fara badan oo ah ferns, mosses iyo lichens. Waxaa la dhihi karaa hal hektar oo kaymaha hoose ah in ka badan 300 oo nooc oo geedo ah ayaa lagu gartaa tiro orchids iyo bromeliads ah.
Hoyga iyo meesha kaynta dooxada ku taal
Gobolkan oo dhan waxaa loola jeedaa aagga dabiiciga ah ee Peru wuxuuna ku kobcayaa bannaanka ku fidsan qaybta bari ee dalka. Aaggan waa kan ugu ballaaran tan iyo markii uu ku fadhiyo aag ku dhow 65 milyan oo hektar. Xuduudaha keynta hoose waxay la kulmaan hawdka sare ee buuraha Andean. Sidoo kale waxaa laga heli karaa dhanka bari hadii aan kusii socono kaymaha Amazon ee Brazil, dhanka koonfur-bari waxay xuduud la leedahay Bolivia qaybta waqooyi waxay xuduud la leedahay Colombia iyo Ecuador
Kaymahaan hooseeya waxaa loo tixgeliyaa biome. Tani waa sababta oo ah ma ahan nidaam deegaan oo fudud, laakiin waa biome ay ku jiraan mosaic ah nidaamyada deegaanka. Si kale haddii loo dhigo, waa nooc ka mid ah nidaamyada bey'adda ee dhul keliya. Waan helnay keynta aan daadadku fariisan karin, keynta dhul-biyoodka ah, dhiiqo, dhul qoyan, keymaha ciidda cad, iwm Mid kasta oo ka mid ah nidaamyada deegaanka wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah iyo kala duwanaansho noole oo ku soo baxa iyadoo loo eegayo astaamahan deegaanka.
Qaab-dhismeedka dhirta ee keynta dooxada isku mid ma aha. Kala duwanaanshaha weyn ee noocyada iyo meeleynta iyo shuruudaha mid kasta oo ka mid ah, waxaa jira kala duwanaansho weyn oo xagga dhismaha ah. Dhinac marka laga eego, aagga aan fatahaaddu ka dhicin waxaan ka helaynaa carro leh qaab dhismeed wanaagsan iyo taran ballaadhan. Meelahan waxay leeyihiin 3 ama 4 dabaq oo ah geedaha arboreal iyo wax ka hooseeya oo ka kooban geedo iyo dhir dhireed. Thanks to bacriminta carrada iyo cufnaanta geedaha, heer qoyaan badan ayaa la hayaa sanadka oo dhan.
Dhinaca kale, waxaan leenahay dabaqa sare ee hawdka oo gaara dhirirkiisa ilaa 40 mitir oo leh geedo soo baxaya oo jooggoodu yahay 60 mitir. Hareeraha jirridda geedaha iyo qaybta hoose waxaan ka helaynaa kala duwanaansho ballaaran oo dhir fuulista dabeecado kala duwan ah iyo sidoo kale dhir dhireed.
Ciidda iyo cimilada hawdka hoose
Waxa ugu caansan ayaa ah in carrada ku badan keymaha hawdka hoose ay leedahay halabuur ciid ah, inkasta oo ay tahay tan ugu isbedbedelka badan. Waxaan sidoo kale aragnaa carrada ciidda ah ee bacaadka ah ee u janjeera inay noqdaan carro dhoobo leh oo ka mid ah meelaha qoyaanku ka sarreeyo. Caadi ahaan waa carradu nafaqo-liidata waxaana laga helaa iyagoo ku dhex wareegaya daaqa ballaaran. Waxaa jira tiro dhan oo fungi iyo firqooyin ah oo gacan ka geysta dib-u-warshadaynta iyo adeegsiga nafaqooyinka ka yimi maaddadii dabiiciga ahayd ee dhimatay. Sidaan ognahay, waxaa jira isdhexgalyo kaladuwan oo u dhexeeya waxyaalaha nool ee loo yaqaan silsiladda cuntada. Xidhiidhka ugu dambeeya ee silsiladan ayaa ah kuwo wax dumiya. Shaqadeeda ugu weyni waa soo saarista walxaha dabiiciga ah ee noolaha dhintay. Tan awgeed, waa suurtagal in lagu soo laabto gobolka bilowgiisii ​​lana soo celiyo dhammaan tamarta shabakadda.
Marka laga hadlayo cimilada, hawdka hoose ee roobka iyo cimilada diiran ayaa ku badan. Heerkulku aad buu u sarreeyaa laakiin xaaladaha deegaanka ayaa roobabku aad u badan yihiin. Qoyaankeeda badan wuxuu ka yimaadaa daruuraha laga soo jiido jiirada Atlantik iyadoo loo socdo jihada bari iyo galbeed. Daruuraha oo dhami waxay kor u kacaan wejiga bari ee Andes markay qaboobaanna waxay isku urursadaan inay soo saaraan duufaano xoog leh iyo roob badan.
Heerkulka ugu sarreeya ee laga helo hawdka hoose waa illaa 37 digrii inta lagu jiro bisha Oktoobar. Ugu yar ayaa la soo bandhigi doonaa bisha Luulyo waxayna kudhowaad yihiin 17 darajo. Sidaas, celceliska inta badan waa 26 darajo. Adoo yeelanaya roobab badan, oo leh qiimayaal gaaraya 3.000 oo milimitir, Xitaa meelaha qaar buu dhaafey 5.000 mm wuxuu ka dhigayaa heerka qoyaanka qaraabada mid aad u sareeya. Waxaan helnaa goobo leh heer qoyaan u dhow 88%.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto hawdka hooseeya iyo astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Kaymaha hoose